I-COVID-19: Abathengi kunye ne #StayAtHome Statistics Statistics | Martech Zone
Izinto azijongeka zintle kwikamva loqoqosho lomntu nabani na enikwe ubhubhane kunye nokuyalela uku-oda koorhulumente kwihlabathi liphela. Ndiyakholelwa ukuba lo izakuba sisiganeko esiyimbali esizakubanefuthe elikhulu, elihlala lihleli kwilizwe lethu… ukusukela ekunyukeni kwamatyala kushishino kunye nentswela ngqesho, nangona imveliso yokutya kunye nolungiselelo. Ukuba akukho nto yimbi, lo bhubhane ubonakalisile ukuba buthathaka kangakanani uqoqosho lwehlabathi.
Oko kwathiwa, imeko enyanzelekileyo enje yenza abathengi kunye namashishini avumelane. Njengoko amashishini esenza eyabo indima kwaye enabasebenzi besebenza ekhaya, sibona ukwamkelwa ngobuninzi kunxibelelwano lwevidiyo. Mhlawumbi siya kufikelela kwinqanaba lokuthuthuzela ngalo msebenzi apho uhambo lweshishini lunokuncitshiswa kwixesha elizayo-ukwehlisa iindleko zokusebenza kunye nokunceda okusingqongileyo. Ayizondaba zimnandi kumashishini okuhamba kunye neenqwelo moya, kodwa ndiqinisekile ukuba baya kulungelelanisa.
I-OwnerIQ, efunyenwe ngu-Inmar kwi-Q4 2019, ibonelela ngokuqonda kancinci malunga nendlela abathengi abalungelelanisa ngayo nesiqhelo sokuhlala ekhaya, bethenga ekhaya, kunye nokulungisa indlela abazithenge ngayo kwiimveliso ezifanelekileyo. I-OwnerIQ ihlalutye idatha ye-intanethi kwi-Platform ye-CoEx ukubonelela ngolwazi, olwalubonisa ngokucacileyo kwi-infographic yabo, Benza njani abaThengi #uHomeHome.
Umthengi Iinguqu ze-COVID-19 zokuziphatha
Kucace gca kwi-infographic yokuba abathengi bachitha imali eyongezelelweyo kwizinto ezininzi:
Izixhobo ezinxulumene neOfisi -Baphucula intuthuzelo kunye nemveliso ngelixa besebenza kwiofisi yasekhaya.
Umoya wasekhaya - utyalo-mali kwizinto ezenza ukuhlala ekhaya kuthuthuzele ngakumbi.
Care Personal - ukutyala imali kwizinto ezenza lula iingqondo zabo kuxinzelelo lwendyikitya yokuzahlula.
Unonophelo lweKhaya -Kuba sichitha ixesha ekhaya kwaye singaphumi, sityala imali kwiiprojekthi ngaphakathi nakufutshane namakhaya ethu.
I-Xtensio: Yenza, ulawule, kwaye ubonise ukuBambisana kwakho koBuchule